Maalinta: Meey 6, 2019
Qaababka ugu quruxda badan ee East Express waxay ku tartami doonaan xawaare buuxa
Iyaga oo kaashana Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, tartan tartan sawir qaadis ah waxaa marti galinaya TCDD Taşımacılık AŞ. "Tam O An" East Express National, oo ay kujirto sawirro ka mid ah 'Express Express' ee wadada u dhaxeysa Ankara iyo Kars, [More ...]
Ardayda Hike ee Gaadiidka Dadweynaha ee Bursa
Ka dib qawaaniinta cusub ee ay sameysay Dowlada Hoose ee Bursa ee ku saabsan qarashka gaadiidka dadweynaha in ay ansax noqoto laga soo bilaabo 1 May, sicirka kororka ayaa ka muuqda ardayda marka loo fiiriyo baahida xoogan ee shacabka, iskuulada ayaa xirmi doona 16 June 2019 [More ...]
Tirada sii wadaan in ay ku kici dalka Turkiga. Marka loo eego, wadarta guud ee iibka 2019 ee rubucii ugu horreysay ee sanadka ayaa gaadhay 1853, taas oo tirada moodooyinka isku-dhafka ah ay ahaayeen 1810, halka tirada unugyada 43 ay ka koobnaayeen% moodooyinka koronto ee 100. [More ...]
Lines Special ah oo ka socda IETT ilaa Ramadan
Agaasinka guud ee IETT Shirkadaha ayaa sii wada hirgalinta qadka Ramadaanta ee sanadkan. Bisha Ramadaan, Suldaanka kow iyo toban bilood, IETT wuxuu tagayaa Ramadaan si uu ugu fidiyo gaadiid sahlan oo ku habboon Istanbulites. [More ...]
Rashan Mahyada Sawir Sawir ah oo laga furay Tünel
Suldaanka kow iyo tobanka bilood ah ayaa furay sawir muujinaya mawduuca R Ramadaan Mahyaları Karak ee Saldhiga Karaköy ee Tünel bisha Ramadaan awgeed. Bandhigga ayaa furmi doona inta lagu jiro bisha Ramadaan. Qarniyo-Dhaqameedyadii hore Mahyacilik [More ...]
37 Thousand TL Qaadashada Laga Soo Saaray Sarkaalka Saldhigga ee Denizli
Saldhigga Tareenka ee Denizli, oo u shaqeynayay sarkaal xafiiska sanduuqa ah oo magaciisa lagu sheegay NU seddex maalmood oo xafiiska sanduuqa 37 kun oo TL ah ayaa la qabtay isagoo ku saleysan arrimo qasmaal ah ayaa la xiray oo loo diray xabsiga. Daacadnimo, TCDD Denizli [More ...]
Isaga oo ka hadlaya 7.Tisaladeedka Baaskiilladaha durugsan, Duqa Ekrem Y ,ce wuxuu yiri, olarak Maaddaama Magaalo-weynaha, waxaan ku dhagannahay ahmiyad weyn si aan uga qeybqaadanno howlaha abuuri doona wacyi galinta taraafikada. Waxaan u maleynaynaa in baaskiil wadida mudnaanta leh ka leeyihiin wacyiga. Baaskiil ku yaal Sakarya [More ...]
Turkish Science Science Expo, oo loo abaabulay markii sideedaad oo ay kujirto magaca shirkada maalgalinta ee Turkish Airlines oo ay soo bandhigtay Dowlada Hoose ee Bursa iyo BeBKA, ayaa leh in kabadan 200 kun oo qof oo soo booqday iyo 101 kun oo 358 aqoon isweydaarsi ah. [More ...]
Baalashooda for Life World Run: Mid ka mid ah ay dhacdo ugu weyn isboortiga caawimaad dunida, "baalal for Life World Run" ee waqtiga 4aad ee Turkey, taas oo marti cagta Izmir, maalmaha taariikhiga ah [More ...]
Dabcan xiiso u leh rakaab u safraya Izmir Metro
Rakaabkii ku safrayay Izmir Metro ayaa la kulmay yaab yaab leh. Dawladda Hoose ee Magaalada Izmir IZELMAN Ardayda xanaanada ayaa diyaariyey buugaag iyaga u gaar ah ka dib markii ay aqriyeen rakaabkii tareenka dhulka hoostiisa siiyey iyaga oo siinaya dadka waaweyn dhagaysan. Ardayda dugsiga barbaarinta ayaa leh [More ...]
RayHaber 06.05.2019 Warbixinta Shirka
Adeegyada Shaqaalaha Urla iyo Akcay Xarumaha Tababarka iyo Madaddaalada